Soo-saareyaasha & Shirkadaha Soo-saareyaasha pH / ORP - Shiinaha Warshad gudbiyaha pH / ORP
Khadka tooska ah ee pH / ORP Meter T4000
Warshadaha on-line-ka PH / ORP mitir waa kormeerida tayada biyaha ee khadka iyo qalabka xakamaynta oo leh microprocessor.
Fiilooyinka korantada ee loo yaqaan 'PH electrodes' ama 'electrodes ORP' oo noocyo kala duwan ah ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshad koronto, warshadaha kiimikada kiimikada, qalabka elektaroonigga ah ee macdanta, warshadaha macdanta, warshadaha waraaqaha, injineernimada qallalan ee bayoolojiga, daawada, cuntada iyo cabitaanka, daaweynta biyaha deegaanka, biyo-baxa, beeraha casriga ah, iwm.
Khadka tooska ah ee pH / ORP Meter T6000
CS2768 ORP koronto
Naqshadeynta biriijka cusbada laba jibaar, iskudhafka wejiga labalaabka, adkaysi u leh biyo dhexaad dhexdhexaad ah.
Qalabka korantada ee dhoobada dhoobada dhoobada ah ayaa ka soo baxa is-dhexgalka, taas oo aan sahlaneyn in la xannibo.
Design Naqshadeynta guluubka galaaska-xoogga badan, muuqaalka muraayadda ayaa ka xoog badan.
Bul Nalalka dareemayaasha weyn waxay kordhiyaan awoodda lagu dareemo ion-yada haydarojiin, iyo inay si wanaagsan ugu shaqeeyaan jawiga qalafsan.
Material Qalabka elektarooniga ah PP wuxuu leeyahay iska caabin saameyn sare leh, awood farsamo iyo adkeysi, iska caabin noocyo kala duwan oo dareerayaal dabiici ah iyo asiidh iyo daxal alkali.
Ith Iyada oo leh awood fara-gelin ah oo fara-gelin ah, xasilooni sarreysa iyo masaafada gudbinta dheer. Ku sumoobid la'aan deegaanka kiimikada adag.
CS2543 dareeraha ORP
Loogu talagalay tayada biyaha guud.
Naqshadeynta buundada cusbada laba-geesoodka ah, is-dhexgalka faleebada lakabka laba-geesoodka ah, adkaysi u leh biyo-dhexaad dhexdhexaad ah.
Qalabka korantada ee dhoobada dhoobada dhoobada ah ayaa ka soo baxaysa is-dhexgalka mana fududa in la xakameeyo, taas oo ku habboon kormeerka warbaahinta guud ee tayada biyaha.
Naqshadeynta guluubka dhalada ee xoogga badan, muuqaalka muraayadda ayaa ka xoog badan.
Koronto wuxuu korsadaa fiilada dhawaaqa hooseeya, soo saaraha signaalka wuu sii fog yahay waana xasilloon yahay
Nalalka waaweyn ee dareenka dareemaya waxay kordhiyaan awoodda lagu dareemo ion-yada haydarojiin, waxayna si wanaagsan ugu qabtaan warbaahinta guud ee tayada biyaha.
CS2701 ORP koronto
CS2668 dareeraha ORP
Loogu talagalay deegaanka Hydrofluoric acid.
Korontada waxaa laga sameeyaa filim muraayad xasaasi ah oo hooseeya, sidoo kale waxay leedahay astaamaha jawaab celinta degdegga ah, cabbiraadda saxda ah, xasiloonida wanaagsan, mana sahlana in la hydrolyze laga sameeyo arrimaha ku saabsan warbaahinta deegaanka hydrofluoric acid. Nidaamka koronto tixraaca waa nidaam tixraac la'aan, adag, aan isweydaarsi lahayn. Gebi ahaanba iska ilaali dhibaatooyinka kala duwan ee ay sababaan is-weydaarsiga iyo xannibaadda is-goyska dareeraha, sida koronto tixraaca waa sahlan tahay in la wasakheeyo, sumaynta foosha xun ee tixraaca, tixraaca luminta iyo dhibaatooyinka kale.
Khadka tooska ah ee pH / ORP Meter T6500
Qiimaha pH (acid, alkalinity), ORP (qayilo, yareyn kara) qiimaha iyo heerkulka xalka aqueous ayaa si isdaba joog ah loola socday loona xakameeyay.
CS1668 Caaga Guryaha Caaga ah pH Sensor
Loogu talagalay dareeraha dareeraha, deegaanka borotiinka, silicate, chromate, cyanide, NaOH, biyaha badda, brine, petrochemical, dareeraha gaaska dabiiciga ah, deegaanka cadaadiska badan.
CS1768 Caaga Guryaha Caaga ah pH Sensor
CS1500 Muraayadaha Guryeynta pH Sensor
Dareeraha Dareemida Isukeenista Daawaha Titanium, Chlorophyll Sensor, Waxqabadka TDS Sensor, Feeraha Dareeraha Fududeeyaha, Sensor-ka Electromagnetic, Quadrupole Shaxanka Samaynta Iskuduwaha Sawirka,